युगसम्बाद साप्ताहिक - दृष्‍टिकोण
Sunday, 11.17.2019, 05:37am (GMT+5.5) Home Contact
Thursday, 11.14.2019, 11:56am
भारतले लिपुलेक भञ्ज्याङ् र लिम्पियाधुराबीचको ३७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरी आफ्नो नक्सामा गाभेपछि नेपालमा जनता, सरकार र राजनीतिक दलहरुबीच अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । भारतको हेपाहा चरित्रबिरुद्ध दलहरु र सचेत भएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय धारणा बनाएर कालापानी नेपाली भूमि हो भनेर भारतलाई जवाफ दिइसकेको छ भने यस विषयमा कुटनीतिक छलफल सुरु गर्ने बताइसकेको छ । कालापानी क्षेत्र भारतले हडपेपछि सरकारले सो क्षेत्र नेपालको हो र भारतको नक्सा मान्य नभएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विज्ञप्ति जारी ग¥यो । यसको प्रत्तिउत्तरमा भारतले नेपाली भूमि नगाभेको दावी ग¥यो ।
Tuesday, 10.22.2019, 01:29pm
मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट संस्थागत रुपमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यसहित स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आज कुन रुपमा विकसित भएको छ भनेर हेर्दा विगत केही वर्षयता यसको महाधिवेशनमा देखिएका दृश्यहरुले नै स्पष्ट पार्दछ । थोरै लगानी धेरै चर्चा अनि राजनीतिकरणले थिलथिलो बनेर विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको यो विश्वव्यापी सञ्जाल भएको संस्था अब भरोसा गर्न लायक नरहेको भन्दै यसका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले असोज २८ गते एनआरएनएको नवौं महाधिवेशन नै वहिस्कार गर्नुभयो– संस्थाभित्र राजनीतिकरण भयो भनेर ।
वैदिक सनातन धर्मले ‘बसुधैव कुटुम्बकम्’को सिद्धान्त अंगालेको छ । विश्वमा भातृत्वको चाहना गर्ने यो सूत्रको प्रमुख ग्रहणकर्ता नेपाली भने यही धर्मले विकासमा अबरोध ग¥यो भन्दै बिरोध गरिरहेका छौं । विशेष गरी नेपालीहरुको महान पर्व दशैं लगायतका चाडपर्व कतिपय यसको रुपान्तरण हुनुपर्छ, दशैं प्रगतिशील भएन भन्ने आरोप लगाउँछन् ।
देश उकासिने हैन झन्झन् भास्सिने छ- यादब देवकोटा
Wednesday, 10.02.2019, 05:15pm
यदि सहिष्णुुताा कायम गर्न सकिएन भने समाज विभाजित मात्र हैन द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुन्छ । अहिले राजनीति यस्तै दिशातर्फ उन्मुख छ । यस्तै प्रवृत्तिले देश दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दैछ, समाज भत्कँदैछ । राम्रो कामको चाहना राख्नेहरुको दोहोलो काढिन्छ अनि जिम्मेवारीमा बसेकाहरु आफ्नो शक्ति आर्जन र आफ्ना पक्षको वकालत गरेरै समय कटाइरहन्छन् भने देशको स्थिति यहाँभन्दा फरक हुने हुने कुरै भएन ।
न वाइडबडी न एनलेस मात्र ज्ञानेन्द्र शाही - यादब देवकोटा
Wednesday, 09.25.2019, 03:45pm
एउटा व्यक्तिको पछाडि सिंगो संगठन लागिपर्छ भने त्यो व्यक्ति शक्तिशाली मान्ने कि संगठनलाई निरीह ? अहिले यस्ता प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । केही समययता सारुढ दलका नेताहरु राजतन्त्र फर्काउने षड्यन्त्र भैरहेको, प्रतिगामीले टाउको उठाइरहेका छन् भन्दै चिन्ता र त्रास व्यक्त गरिरहेका छन् । अनि सत्तारुढ दलका भातृ संगठनहरु महंगी, भ्रष्टाचारको बिरोध गर्नेहरुलाई ‘राजावादी’ भन्दै बिरोध गरिरहेका छन् ।
सरकारले जिम्मा लिउ बालबालिकाको ! - यादब देवकोटा
Tuesday, 09.17.2019, 12:11pm
“सुनिश्चित बालअधिकार : समृद्ध राष्ट्रको आधार” भदौ २९ गते आइतबार मनाइएको यस वर्षको बाल दिवसको नारा थियो यो । आज बालअधिकारका यावत पक्षहरुमा राष्ट्रले कति योगदान दिएको छ र अन्य सरोकारवालाहरुले कति चासो दिएका छन् भन्ने महत्वपूर्ण विषय पनि उठिरहेकै छ । विशेष गरी बालबालिकाका शिक्षा र स्वास्थ्य सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो र यी दुई आधारभूत अधिकारको पूर्णताबिना कुनै पनि राष्ट्र समृद्ध बन्न सक्दैन ।
राष्ट्रका कर्णधार मानिएका बालबालिकाले उचित शिक्षा र स्याहार पाएनन् भने उनीहरूको जीवन वर्वाद त हुन्छ नै राष्ट्रका लागि पनि ठूलो बोझ थपिनेछ ।
माल भएर चाल नपाएको अवस्था - यादब देवकाटा
Tuesday, 09.10.2019, 08:21am
नेपाली समाजमा एउटा उखान छ ‘माल पाएर चाल नपाउने’ हो यस्तै अवस्था सिंगो देशको छ । यहाँ भएका स्रोत–साधनको सदुपयोग गर्नेतिर कसैको ध्यान छैन ध्यान छ त केवल बाहिरी ऋण र अनुदान माग्नमै । देशभित्रै उद्यमशीलताको विकास गर्ने, आयआर्जनका यावत पाटाहरुलाई दुरुस्त राख्ने चाहना नै कसैमा छैन । यसैले त विश्वकै अनुपम नमूनाका रुपमा रहेको नेपाल संसारका १३१ शहरहरुमा बस्न लायकको सूचीमै परेन । यसको एउटै कारण छ– मानव बस्नलायक हुनुपर्ने कुनै पनि पूर्वाधार नेपालका शहरहरुमा छैन ।
एउटा पत्रकारप्रति यत्रो समर्थन ? - यादब देवकोटा
Tuesday, 08.20.2019, 01:28pm
रवीको पक्षमा उत्रेको जनता कसैको उक्साहटमा आएका थिएनन् । रवी लामिछानेको कामका कारण उनीहरु सडकमा उत्रिएका थिए । आजसम्म कुनै नेताको पक्षमा यति मानिस सडकमा उत्रेका थिएनन् । जनताको मन जिते समर्थनका लागि रक्सी र मासु भात खुवाउनु पर्दोरहेनछ भन्ने रवी लामिछाने प्रकरणले देखाइदिएको छ । यो सतहमा देखिएको सन्दर्भ हो । एउटा पत्रकारको पक्षमा यसरी जनता उत्रेको देख्दा आम पत्रकारहरुले कस्तो महसुस गरिरहेका होलान् ?
हामीलाई इमरान जस्तै प्रधानमन्त्री चाहिएकै हो - यादब देवकोटा
Tuesday, 07.30.2019, 12:38pm
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको अमेरिका भ्रमण, त्यहाँ उनले प्रदर्शन गरेको राजनीतिक–कूटनीतिक कुशलता अनि देखाएको मितव्यवी व्यवहारले नेपाली जनता चकित परेका छन् । मुलुक गरीब भए पनि नेता धनी र जनताले गाँस–बास नपाए पनि नेता विलासी भैरहेको देखेका नेपालीका लागि इमरानको सामान्य जीवनशैली आश्चर्यकै विषय हो । त्यसैले त नेपालमा केही राजनीतिक विश्लेषकहरुले मुलुकलाई ‘इमरान खान’ जस्तो नेता चाहिएको बताइरहेका छन् । इमरानको मितव्ययिता, सदाचारिता अनि भ्रष्टाचारबिरुद्ध कडा कदम नै यसको कारण हो ।
कसरी पाइन्छ सुख कसरी भइन्छ खुसी ? - यादब देवकोटा
Monday, 07.22.2019, 05:40pm
व्यक्ति वा समाज सुखी हुन उसमा मनोवैज्ञानिक तागत हुनुपर्छ अर्थात् मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पहिलो आधार हो भने दोस्रोमा पर्दछ स्वस्थ जीवन । त्यसै गरी सर्वसुलभ र गरिखानसक्ने शिक्षा, सांस्कृतिक विविधताको एकता तथा समान क्षमता, सामाजिक जीवन, पर्यवरणीय विविधता तथा संरक्षण र सुशासनले युक्त मुलुकका जनता वास्तविक सुखी हुन्छन् ।
सडकमा उत्रेका लाखौंजन ‘सामन्ती’ हुन् ? - यादब देवकोटा
Tuesday, 06.18.2019, 02:47pm
गुठी विधेयकको बिरोध गर्दै सडकमा दैनिक लाखौं जनता उत्रेका छन् । यसको बचाउ गर्नेहरु “गुठी सामन्ती प्रथा हो र यसको अन्त्यका लागि विधेयक ल्याएको र यसको बिरोध गर्नेहरु सामन्ती हुन्” भन्न थालेका छन् । हिजो जसको भोट क्रान्तिका लागि थियो आज तिनैको आवाज सामन्ती लागेको छ सरकारलाई । जनताको आवाज सम्बोधन गर्ने गरी साम्य पार्नेतिर लाग्नुको साटो सरकारका प्रवक्ता न गुठी विधेयकका बिरोध गर्नेहरु ‘सामन्ती’ हुन भन्दै आगोमा घीउ थप्ने काममा लाग्दा स्थिति अरु उत्तेजक बन्नु स्वाभाविक छ । यद्यपि विधेयकमा पुनरावलोकन हुनुका विकल्प छैन र प्रधानमन्त्री ओलीले नै यो कुरा स्वीकारिसक्नुभएको छ ।
राजनीति विकास र समृद्धिका लागि - यादब देवकोटा
Wednesday, 06.05.2019, 12:38pm
नेपालमा राजनीतिलाई पेशा–व्यवसाय जस्तै बनाएर समृद्धिको भ¥याङ ठड्याउनेहरुको भीडमा यस्ता केही नेता छन् र थिए जो राजनीति मात्र मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अघि बढ्थे । अनि त्यसताा व्यक्तित्वहरुलाई अनावश्यक विवादमा पनि तानिन्छ । खासमा स्वार्थ नमिलेपछि आरोपित गर्ने नेपाली समाजको संस्कार नै हो ।
बुद्धिजीवी र थिङ्क ट्याङकको हैसियत - यादब देवकोटा
Tuesday, 05.28.2019, 11:17am
संसारका विकसित मुलुकहरुले विकासको आधार तयार गर्न आफ्ना देशका थिङ्क ट्याङकलाई हमेसा सक्रिय राख्छ । उनीहरुलाई कुनै न कुनै अनुसन्धान र अध्ययनमा संलग्न गराएर नयाँ नयाँ सोचको विकास गर्छ । सरकारले त्यसै अनुसार काम गर्न अनि देश बन्छ । तर नेपालमा यस्तो विडम्बना छ कि नेताहरु सबैभन्दा जान्नेसुन्ने । उनीहरुले नजानेको कुनै विषय नै हुँदैन ।
युक्रेनको चुनावी नतिजा नेपालले के सिक्ने ? - यादब देवकोटा
Tuesday, 04.30.2019, 01:49pm
एकातिर कलाकारहरु देश विकास गर्दै जाने अर्कोतिर सरकार केही नगरी गफ चुटेर बस्ने गर्दा जनताले विकल्प खोज्न थालिसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताइरहँदा युक्रेनमा हालै सम्पन्न पहिलो चरणको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ४१ वर्षीय हाँस्य कलाकार भोलोदिमिर जेलेन्स्की भारी मतले विजयी भए ।
अपूर्व धार्मिक सहिष्णुताको नमूना : यादब देवकोटा
Thursday, 04.25.2019, 02:23pm
नेपाल अपूर्व धार्मिक सहिष्णुता भएको मुलुक हो । यहाँ धर्म र जातका नाममा कहिल्यै कुनै द्वन्द्व भएन तर डेढ दशकयता नेपालको यो राष्ट्रिय गौरबको चिनारी मेटिंदै गएको छ । यहाँको धर्म, संस्कृति र परम्परा मास्दै पश्चिमा शक्तिको बलमा विद्वेष फैलाउने काम भैरहेको छ । नेपालमा जस्तो धार्मिक सहिष्णुता कतै छैन भन्ने उदाहरण हजारौं छन् ।
विक्रम संवत जीवनचर्याको शास्त्रीय गणित- यादब देवकोटा
Tuesday, 04.16.2019, 01:34pm
हरेक वैशाख १ गतेबाट नयाँ सम्वत्को शुभारम्भ हुन्छ । यतिबेला हामी विक्रम सम्वत् २०७६ सालको प्रारम्भमा छौं । हाम्रो प्रचलनमा रहेको विक्रम संवत् वैदिक सनातन संस्कृतिमा अनुप्राणितहरुको जीवनचर्याको उच्च वैज्ञानिक गणितीय पद्धति हो । विक्रम संवत अन्तर्गत ६० वटा सम्वतसर हुन्छन् । प्रत्येक ६० वर्षमा सम्वत दोहोरिन्छ । त्यसैले यसलाई षष्टि सम्वतसर भनिन्छ ।
सुरक्षित बस्ती नै विपत्तिबाट जोगिने उपाय - यादब देवकोटा
Wednesday, 04.10.2019, 10:59am
एकाएक मौसममा हुने बदली र मच्चिने विचण्डाको कारण जलवायु परिवर्तनकै असर हो । अहिले विश्व यसैको त्रासमा छ । जलवायु परिवर्तनले गरिबीलाई अझ जोखिममा पार्दछ र सीमान्तकृत एवं जोखिममा परेका समूहलाई अझ कठिनाइ बेहोर्न वाध्य पार्दछ । उदाहरणका लागि, दक्षिणपूर्वी एसियामा करिब २२ करोड भन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । यिनीहरू सामुद्रीक तटीय क्षेत्र र होचा भू–भागमा बसोबास गर्दछन् ।
जोखिममा पर्दैछ इन्टरनेट खेलले युवा पुस्ता - यादब देवकोटा
Thursday, 04.04.2019, 01:37pm
आजभोलि सूचना प्रविधिको विकास र पहुँचले हरेकको हातमा स्मार्ट फोनसंगै विभिन्न प्रकारका खेलले गर्दा युवा पुस्तामा शारीरिक व्यायाम हुने खालका खेलभन्दा त्यसैमा बढी झुम्मिने मात्र हैन यसको लतमै फसेका छन् सूचना प्रविकको विकाससंगै यसमा आम मानिसको सहज पहुँचले एकातिर जीवन सरल बनाएको छ भने अर्कोतिर दिनप्रतिदिन नयाँ नयाँ समस्या र कठिनाइहरु उत्पन्न भैरहेको प्रष्ट देखिएका कारण विश्वका विभिन्न मुलुकमा यसमाथि कडाई गर्न थालिएको छ ।
पैसामा रमाउँदा पतन हुँदैछ समाज - यादब देवकोटा
Thursday, 03.28.2019, 11:08am
रुपैयाँ–पैसा र भोगविलास नै सुख हो भन्ने मान्यताले जरो गाडेको समाजमा सुखको वास्तविक अनुभूति कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने व्यवहारिक ज्ञान र अनुभव साटासाट हुन सकेको छैन । अहिले भौतिक सुविधा त्यो पनि अत्यन्त सरल तरिकाले पाउने होडवाजी चलेको छ । यसैको एउटा उपजका रुपमा लिन सकिन्छ वैदेशिक रोजगारीलाई । हुन त वैदेशिक रोजगारी अहिलेको बाध्यता पनि हो । किनभने मुलुकमा रोजगारी सिर्जना नारामा मात्र भैरहेको छ ।
जेनेभामा उठेको ग्रेटर नेपालको आवाज - यादब देवकोटा
Monday, 03.18.2019, 04:43pm
सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ ले सुगौली लगायत नेपाल र तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएका सबै सन्धि तथा सम्झौताहरू खारेज गरेको छ । सो धारामा यो सन्धि कार्यान्यनमा आएपछि यसअघि भएका सबै सन्धि तथा सम्झौताहरू स्वतः खारे हुनेछ भनिएको छ । यस हिसाबले सन्धि अनुसार नै नेपालको भूमि फिर्ता हुन्छ भन्ने मानिए पनि नेपालका शासकहरूले सो विषयमा भारतसंग कुरा उठाउन सकेका छैनन् । उनीहरू सन् १९५० को सन्धि मात्र हैन, भारतले कार्यान्वयन नगरेका जलस्रोत सम्झौताहरूको पालनामा समेत दह्रो कुरा राख्न सकेका छैनन् । भारतको चाकडी गरेरै सत्ता र शक्तिमा पुग्ने आकांक्षा राख्नेहरूकै कारण नेपालको राष्ट्रियता कमजोर मात्रै बन्दैगएको छ ।
» चाकरी–चाप्लुसी र भजनमण्डली - यादब देवकोटा
» मानिसलाई पशु बनाउने खेल - यादब देवकोटा
» नेपाली कांग्रेस अब कुन बाटो हिंड्ने - यादब देवकोटा
» भत्ता हैन उद्यमशील बनाउने हो कि- यादब देवकोटा
» रुख काट्नै नहुने हैन तर सफा नियतले- यादब देवकोटा
» दुई तिहाईको सरकारका यो गति ?- यादब देवकोटा
» काठमाडौंको कष्ट फोहर
» पाँच हजार वर्षअघिको समाजवाद - यादब देवकोटा
» नेपाल धनी हुन्छ पानी बेचेर - यादब देवकोटा
» भ्रम, विभाजन र हिनताले ग्रस्त युवा
» जीवन सकिए पनि विचार अमर हुन्छ - यादब देवकोटा
» सक्रिय मनसुन र विपत्तिको त्रास
» चुनावी चर्चा - सातपटक प्रधानमन्त्री हुने देउवाको दावी
» मन्त्रीहरू करोडपति, जनता कहिले ? - यादब देवकोटा
» गरे त हुँदोरहेछ नि ? - यादब देवकोटा
» सस्तो बजारका सस्ता सामान र मन्त्री
» अब सिंहदरबार पनि धुर्मुसलाई दिए हुन्छ
» सानो कुरामा खुसीले उफ्रने हामी
» इशाईकरणको अर्को अध्याय ‘गाई काण्ड’
» विमानको इतिहास, उडान र दुर्घटना